လူသားအားလုံးအတွက်: သင်းကွဲငှက် တို့ ၏အောင်ပွဲ
**** တစ်ခါက ငှက်တွေကို ဖမ်းဆီးပြီး ရောင်းချကာ အသက်မွေးမြူရတဲ့"ငှက်မုဆိုး"တစ်ယောက်ရှိခဲ့ဖူးပါတယ်၊သူရဲ့အလုပ်က နေ့စဉ် ငှက်ကလေးတွေကို ပိုက်ကွန်နဲ့အုပ်ပြီးထောင်ဖမ်းရတဲ့ အလုပ်ပေါ့.တစ်ခါတလေ မုဆိုး အတွက်ကံကောင်းပေမဲ့ ငှက်ကလေးတွေ အတွက်တော့ ကံဆိုးတဲ့နေရက်ပေါ့.မုဆိုး အတွက်ကံကောင်းတယ်ဆိုတာက ငှက်ကလေးတွေ စည်းလုံး
ညီညွတ်မှု့မရှိတဲ့အခါ မုဆိုးရဲ့ မာယာပိုက်ကွန်မှာ
ကံဆိုးချင်းနေ့ရက်ပေါ့.ငှက်ကလေးတွေ စည်းလုံးညီညွတ်မှု့ မရှိလေ မုဆိုးက ကြိုက်လေပဲ.ဒီလို စည်းလုံးညီညွတ်မှု့မရှိမှလည်း သူ့လုပ်ငန်းကအောင်မြင်မှာလေ.ဒါကြောင့်(လူနာမျက်ဖြူဆိုက်လေ ဆရာဝန်ကြိုက်လေ)ဆိုတဲ့မြန်မာ စကားပုံအတိုင်းဖြစ်ကြရတာပေါ့.ငှက်ကလေးတွေရဲ့ ကံဆိုးခြင်း နေ့ရက်တွေများလေ မုဆိုးအတွက်ကံကောင်းခြင်းနေ့ရက်တွေက လှပလေပါပဲ.ကံဆိုးတဲ့နေ့ရက်တွေများလာတာနဲ့အမျှ ငှက်ကလေးတွေရဲ့ မျိုးရိုးဇာတ်ဟာ ဆိတ်သုဉ်းလုနီးပါးဖြစ်လာတယ်.ဒီတော့ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ ငှက်က စဉ်းစားရပြီပေါ့.မဖြစ်ချေဘူး ဒီလိုတာ ငါ့တို့
ငှက်မျိုး ငှက်နွယ်တွေ မညီမညွတ် မစည်းမလုံး ရှေ့ဆက်သွားကြရင်ဖြင့်
မုဆိုးရဲ့ မာယာကျော့ကွင်းမှာ တက်ဆင်းပြီး အမျိုးသုဉ်းကုန်တော့မှာပဲလို့
စဉ်းစားမိပြီး.ငှက်ကလေးတွေကို စုရုံးခေါ်ဆောင်ကာ ပြောပြတယ်.ငါတို့
ငှက်ကလေးတွေအားလုံး စည်းလုံးညီညွတ်မှု့မရှိလို့ မုဆိုးရဲ့
ပိုက်ကွန်ထဲမိကြရတယ်.ဒီနေ့ကစပြီး ငါ ပြောသလို စည်းစည်းလုံးလုံး ညီညီညွတ်ညွတ် လုပ်ဆောင်ကြပါ.လုပ်ဆောင်ရမှာက စားကျက်ကွင်းထဲ
ငါတို့အစာစားနေတဲ့အချိန်မှာ မုဆိုးက ပိုက်ကွန်နဲ့အုပ်ဖမ်းလိမ့်မယ်.ငါတို့ကို ပိုက်ကွန်အုပ်မိပြီဆိုတာနဲ့တစ်ပြိုင်တည်း ကောင်းကင်ပေါ်ပျံသန်းကြရမယ်.ပိုက်ကွန်ကိုလည်း ဆူးခြုံပေါ်ကျစေပြီး မုဆိုးရဲ့ဖမ်းဆီးသတ်ဖြတ်ခြင်းမှ လွတ်ကင်းရာကို ငှက်ကလေးတွေအားလုံးပျံသန်းကြရမယ်.စသဖြင့် ခေါင်းဆောင် ငှက်က အမျိုးမပျောက်ရေး အသိတွေပေး ပညာတွေပေး
နည်းလမ်းတွေပေးပါတယ်.ဒီလိုနဲ့ နောက်တနေ့ ငှက်ကလေးတွေ စာကျက်ကွင်းထဲ
အစာကောက်နေတဲ့ အချိန် မုဆိုးကတော့ အရင်ကလိုပဲ ငှက်ကလေးတွေ
စည်းလုံးညီညွတ်မှု့မရှိဘူးအထင်နဲ့ ပိုက်ကွန်ကို အားကုန်လွဲအုပ်လိုက်ရော.ငှက်ကလေးတွေလည်း ညီညီညာညာ ပျံတက်လိုက်တယ် ပိုက်ကွန်လည်း ပါသွားတာပေါ့ ဆူးခြုံပေါ်
ပိုက်ကွန်ကို ချပြီး ဘေးကင်းရာ အရပ်သိုး ပျံသန်းသွားကြပါတော့တယ်.မုဆိုးရဲ့ ကံဆိုးခြင်းနေ့ရက်တွေ တလည့်ပြန်ရောက်ခဲ့ရပြီလေ.(ဇာတ်လမ်းက ဒီလောက်ပါပဲ.) ဒီဇာတ်လမ်းမှာ တိရစ္ဆာန်ဖြစ်တဲ့ ငှက်ကလေးတွေတောင် သူတို့
အမျိုး သူတို့ဘာသာ ကို ချစ်မြတ်နိုးပြီး စွမ်းအားရှိသလောက်
ကာကွယ်ထိမ်းသိမ်း စောင့်ရှောက်သွားတာကို စာဖတ်သူတို့ တွေ့မြင်တဲ့
အတိုင်းပါပဲ.ဒီတော့ စာရေးသူ စာဖတ်သူအားလုံးတို့ဟာ အသိဥာဏ်ရှိတဲ့ လူတွေပါ.တိရစ္ဆာန်တွေတောင် အမျိုး ဘာသာ ကိုချစ်တတ်ရင်. လူတွေဖြစ်တဲ့ ငါတို့လည်း ကိုယ့်လူမျိုး ကိုယ့်ဘာသာ ကိုယ့်သာသနာ ကို ချစ်မြတ်နိုးစွာ ကာကွယ် စောင့်ရှောက်နိုင်ရမှာပေါ့.ပြီးတော့ ငှက်ကလေးတွေနဲ့တူတဲ့ မြန်မာ မိန်းကလေးတွေ မုဆိုး နဲ့တူတဲ့ ဘာသာခြား
လူမျိုးခြားတွေရဲ့ ပစ္စည်းဥစ္စာ ဆိုတဲ့ မာယာပိုက်ကွန်နဲ့ ဖမ်းဆီးချင်းကို
ခံနေကြရတာဟာ ရွှေမြန်မာတို့ရဲ့ စည်းလုံးညီညွတ်မှု့ ဖေးမကူညီမှု့
စတာတွေမရှိကြလို့ပဲ.မုဆိုး ဆိုတဲ့ ဘာသာခြား လူမျိုးခြားတွေရဲ့ အဓိက
ပစ်မှတ်သားကောင်ဟာ ရိုးသားဖြူစင်လှတဲ့ မြန်မာ
မိန်းကလေးတွေပါ.မြန်မာလူမျိုးတွေ မစည်းလုံး မညီညွတ်လေ ဘာသာခြား လူမျိုးခြားဆိုတဲ့ မုဆိုးအကြိုက်တွေ့လေပဲဆိုတာ ရွှေမြန်မာတို့ ဘယ်တော့မှ
မမေ့ကြပါနဲ့.ငှက်ကလေးတွေ စည်းလုံးညီညွတ်လို့ မုဆိုးရဲ့
ဖမ်းဆီးသတ်ဖြတ်ချင်းဘေးက ကင်းဝေးခဲ့သလို ရွှေမြန်မာအားလုံး
စည်းလုံးညီညွတ်ကြမှ ဘာသာခြား လူမျိုးခြားတို့ရဲ့ ဝါးမျိုချင်းကေးက
လွတ်ကင်းနိုင်မှာပါ...ဒါကြောင့် ငှက်ကလေးတွေ မစည်းလုံး မညီညွတ်ခဲ့ကြလို သင်းကွဲပြီး အမျိုးပြုတ်လုနီးပါးဖြစ်ကြရ ဆုံးရှုံးပျက်စီးမှု့တွေရှိကြရပေမဲ့. အမျိုးမပျောက်ရေး စိတ်ဓာတ်တွေမွေးပြီး စည်းလုံးညီညွတ်လို့ အောင်ပွဲရသလို
ရွှေမြန်မာတို့လည်း အရင်က စည်းလုံးညီညွတ်မှု့မရှကြလို့ ဘာသာခြား
လူမျိုးခြားတို့ရဲ့ ဝါးမျို ခံခဲ့ရပေမဲ့ အခုချိန်မှာ လူမျိုး နှင့်
ဘာသာ မပျောက်ပျက်ရေး စိတ်ဓာတ်တွေမွေးပြီး ဘာသာခြား လူမျိုးခြားတို့ရဲ့
တို့မြန်မာပြည် တိုင်းရင်းသားတို့၊မောင်ရင်းနှမလို ချစ်ရမယ်။
စောင့်ရှောက်ကွယ်။ ။ မျိုးဇာတိဂုဏ် မြင့်မားရေးတွက်၊သာကီသွေးတွေ
မွေးရမယ်။ တို့မြန်မာကို လာမထိနဲ့၊ကမ္ဘာသိအောင် ချေမှုန်းမယ်။ ။
ပေးဆပ်မယ်။ ။ အိမ်ရှင်ရိုကျိုး အိမ်ရှင်ကိုးသော၊ အမျိုးဘာသာ
သာသနာကို ခြေဖြင့်နင်းလျှက် အတင်းဖျက် ရက်စက်လွန်းနေပြီ။ တို့တိုင်းပြည်ခို တို့ရေကိ်ုသောက် ၊ ကူထောက်စီးပွား ထုတ်ယူစားပြီး ၊ပြည်ဖွားအ်ိမ်ရှင် ရန်သူထင် အသင်မှားနေပြီ။
စာရေးသူ......အရှင်မဏ္ဍလ(သာသနဓဇဓမ္မာစရိယ---ဝိနယဝိဒူ) ခေတ္တ..မလေးရှား ။
Posted by မိုးယံ at 1:21 PM Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
အခုက ဘယ်လို ဖြစ်နေလဲ ဆိုရင် တစ်ခုခု ဖြစ်တယ်ဟေ့ ဆိုရင် ဆွမ်းကြီး ဝိုင်းလောင်းမယ် ဆိုတာချည်းပဲ။ မိန်းကလေး တစ်ယောက် ဒီလို ကိစ္စတွေနဲ့ ပြဿနာ ဖြစ်နေပြီ ၊ အကူအညီ တကယ်လိုနေပြီ ဆိုရင် သွားမပြောနဲ့ ၊ သွားမလုပ်နဲ့ ဆိုပြီး မသိချင်ယောင် ဆောင်နေတတ်ကြတယ်။ ဒါတွေပဲ . . ဒါတွေက သူများ ပိုပြီး ပျော်တာပေါ့လေ။
ဓာတ်ပုံတွေပါ ဖဘမှာ တွဲကြည့်သွားပါကြောင်း
အချင်းချင်းကို ပြန်ပြီးကြောက်နေရတာက အဆိုးဆုံးပါပဲ...
ဟိုတစ်နေ့ ကတောင် အချင်းချင်းရန်ဖြစ်ကြလို့ ခေါင်းပေါက်ပြီး ဆေးရုံရောက်သူရောက်..ရဲစခန်းရောက်သူရောက်နဲ့ ..
ကျမ ဘလော့ဂ်ကို အလည်လာတာ ကျေးဇူးနော် ကိုမိုယံ...
ဒို့စွမ်းအားရှင်တွေ စည်းလုံးပါ့...၂၀၀၇ တုန်းကဆို ကမ္ဘာသိအောင် လုပ်ပြလိုက်တာ..အဟင်း..ဟင်း...